Sanad guuradii 55 aad ee Ciidan Cirka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Munaasabada 55- Sano Guuradii ka soo wareegatay Markii la aas aasay Ciidanka Cirka Soomaaliya oo qeyb ka ah Ciidanka Xooga Dalka ayaa Maanta waxaa lagu qabtay Xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb galeen Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin sii hayaha Wasiirka Gaashaandhiga Gen Maxamed Sheekh Xasan Xaamud,Wasiira Cusub ee Gaashaandhiga Gen Cabdul qaadir Sheekh Cali Diini, Abaanduulaha Ciidanka Xooga, Ahna Ku simaha taliyaha, iyo Taliyaha Ciidanka Badda, Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xooga Dalka Turkiga iyo Mas’uuliyiin kale.
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Cirka ayaa waxaa ay Munaasabada ku soo bandhigeen Gaada ka ciyaar Qurux badan, iyadoo Ciidanka baambeyda Xooga Dalka ay qayb ka ahaayeen Munaasabada Mas’uuliyiinta ayaana Salaan ka qaatay Ciidanka.
Taliyaha Ciidanka Cirka Soomaaliya Sareeyo Guuto Maxamuud Sheekh Cali (Dable Beyloot) Khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay taariikhda Ciidanka Cirka iyo marxaladihii uu soo maray iyo sida hadda uu yahay wuxuuna uu hoosta ka xariiqay in ciidanka cirka uu u baahan yahay dib u dhis xoog leh taasi uu sheegay in marnaba aan riyo lagu dhisi Karin laakiin loo baahan yahay dadaal xoog leh.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyee ahna ku simaha Taliyaha Sareeyo Guuto C/risaaq Khaliif Cilmi oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ciidanka Cirka iyo xaasaskooda, isagoo ka hadlay qorshaha ay ku doonayaan in dib ay u dhisaan ciidanka Cirka oo ah lafdhabarka dowladda Soomaaliya.
Sii hayaha Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Gen Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ka hadlay Munaasabada ayaa waxaa uu hambalyo u diray Ciidanka Cirka Soomaaliya oo u dabaal dagaya 55-sano guuradii ka soo wareegatay Aas Aaska Ciidankaasi, isagoo u rajeeyay Taliska Ciidanka Xooga in uu horumariyo Ciidanka Cirka Soomaaliya, wuxuuna dhinaca kale uu muujiyay in si wadajir ah munaasabadaasi ay kaga qeyb galaan isaga iyo wasiirka xilka la wareegaya C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Gaba gabada munaasabadda ayaa waxaa hadal ka jeediyay Wasiirka cusub ee xilka la wareegaya Gen C/qaadir Sheekh Cali Diini oo u hambalyeeyay ciidamada ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay horumarka ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Cirka uu ku tilaabsaday, isagoo sheegay in ciidanka uusan aheyn laba sano ka hor sidii uu ahaa.
Wasiirada Cadaalada,Dastuurka iyo Waxbarashada oo maanta la wareegay xilalkooda"SAWIRO"